दशैँकाे टीका लगाउँदा कुन दिशा फर्किने ?Main Samachar
दशैँकाे टीका लगाउँदा कुन दिशा फर्किने ?
१० कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:०५ प्रकाशित
काठमाडाैं । आज बडादशैँकाे मुख्य दिन विजयादशमी । मान्यजनकाे हातबाट नवदुर्गाकाे प्रसाद स्वरुप शुभ साइतकाे प्रतीक राताे टीका एवं समृद्धिकाे प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदै छ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज देवी विसर्जनको साइत बिहान १०:११ बजे रहेको जनाएको छ। टीकाप्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने १०:१९ बजे उत्तम रहेको समितिका अध्यक्ष प्राडा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए। विजयादशमी आफैंमा शुभ दिन भएकाले आज टीका लगाउन सामान्यतस् साइत खोज्न नपर्ने पनि उनले बताए।